10 lalao Adam Cole tsara indrindra amin'ny WWE - Wwe
10 lalao Adam Cole tsara indrindra amin'ny WWE
Adam Cole dia mety hanatevin-daharana izay mamorona fe-potoana misafidy malalaka lehibe kokoa noho ny NBA amin'ity taona ity. Nipoaka ny vaovao tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity fa ny fifanarahan'ny Tompondakan'ny NXT teo aloha dia tokony ho tapitra aorian'ny Summerslam.
zavatra manokana tokony hatao amin'ny sakaizanao
Nanaitra ireo mpankafy sy mpikomy maro ity vaovao ity miaraka amin'i Adam Cole izay ekena ho ny endrik'i NXT. Ny fialany dia mety ho kapoka mafy amin'ny marika sy amin'ny WWE amin'ny ankapobeny. Miaraka amin'ny fifamatorany amin'ireo kintana AEW, dia mety ny haminany mialoha fa handeha any izy raha manapa-kevitra ny hiala amin'ny WWE.
Niala tamin'ny WWE i Adam Cole taorinan'i Summerslam? | Ady ara-panatanjahantena https://t.co/3DzYk6hxTE
- Sportskeeda Wrestling (@SKWrestling_) 2 aogositra 2021
Miaraka amin'ny mety handaozan'i Cole ilay orinasa dia fotoana mety indrindra hitadiavana ireo fihaonana tsy hay hadinoina indrindra tamin'ny androny niaraka tamin'ny fampiroboroboana lehibe indrindra tamin'ny tolona. Ato amin'ity lahatsoratra ity, andeha hojerentsika ireo lalao Adam Cole folo tsara indrindra amin'ny WWE.
ahoana ny fitokisana ny sipako rehefa avy nandainga
# 10. Era tsy niadian-kevitra (Adam Cole, Bobby Fish & Kyle O'Reilly) vs. Sanity (Eric Young, Alexander Wolfe & Killian Dain) vs. Roderick Strong & mpanoratra ny fanaintainana amin'ny lalao WarGames (NXT TakeOver: WarGames 2017)
Vonona ve ianao amin'ny SAFIDA izany #SAnitY hitondra any #NXTTakeOver : WarGames amin'ny 18 Novambra ao Houston's @ToyotaCenter ? pic.twitter.com/TxIsIruWQD
- WWE NXT (@WWENXT) 2 Novambra 2017
Adam Cole dia natomboka tao amin'ny NXT TakeOver: Brooklyn III, nanafika an'i NXT Champion Drew McIntyre niaraka tamin'i Bobby Fish sy Kyle O'Reilly. Ireo telo lahy ireo dia hanjary fantatra amin'ny anarana hoe Era Undisputed. Avy hatrany dia niteraka korontana ho an'ny marika mainty sy volamena izy ireo. Cole, O'Reilly ary Fish dia naniry an'i Roderick Strong hanatevin-daharana ny laharan'izy ireo, saingy nolaviny izany, izay niteraka fankahalana.
Adam Cole, Kyle O'Reilly ary Bobby Fish dia nitaona ny fahatezeran'ny Sanity, mpanoratra ny fanaintainana ary Roderick Strong. Ity dia nanangana fihaonana telo vs. telo vs. telo amin'ny TakeOver manaraka. William Regal dia nihevitra fa ny WarGames ihany no toerana handaminana ny tsy fitoviana. Sambany tao amin'ny WWE, nampidirina ny famoronana Dusty Rhodes ary ho hetsika lehibe TakeOver.
Niady tao anaty tranom-by vy roa izy rehetra. Ity dia kinova hafa amin'ny WarGames tsy misy tafo, saingy mbola nanana ny hamafin'ny WarGames taloha ihany. Nitsangana i Killian Dain ary nanao ezaka lehibe. Ireo mpanoratra ny Pain sy Roderick Strong dia nampiseho ny fony, raha ny ambin'ny Sanity kosa dia nitondra ambaratongam-pahefana tsy toy ny olon-drehetra amin'ny lalao.
Ny vanim-potoana tsy niadian-kevitra dia nampiasa ny faharanitan-dry zareo sy ny fiarahan'izy ireo ekipa araka izay fara heriny. Hetsika lehibe sy lehibe ity izay nampiditra fitaovam-piadiana hampiakarana ny herisetra ary hampiasa tsara ny fehezan-dalàna. Nosintomin'i Adam Cole ny fandresena tamin'ny famelezana ny seza vy, Last Shot, izay nanampy an'i Eric Young. Ny tsirairay dia nanolotra sy nanangana WarGames ho lasa foto-tsakafon'ny NXT.
tokony hilaza amin'ny olona tianao ve ianao?
ny fomba hialana amin'ny olona mandainga aminao
ny fomba hahatonga ny lehilahyo ho be fitiavana kokoa
ahoana no ahalalanao izay hatao amin'ny fiainanao
ny fomba fanonerana ny vady aorian'ny ady
hevitra romantika ho azy satria fotsiny
ny fomba hieritreretana ivelan'ny boaty